Serivisy fanetezana metaly ambony any Sina - Casting Minghe
Manam-pahaizana manokana amin'ny serivisy fanariana maty miaraka amin'ny endrika matihanina sy ny fampandrosoana
102, No.41, Changde Road, Xiaojiejiao, Humen Town, Dongguan, Sina | + 86 769 8151 9985 | sales@hmminghe.com
Momba an'i Minghe
Fivoriambe sy Fitsapana
Casting avy amin'ny fampiasam-bola
Fanipazana rindrina manify
Casting Chambre mafana
Casting Chambre mangatsiaka
Serivisy fanariana hafa
Fanariana sombin-javatra very
Fanerena fanerena ambany
Fanariana bobongolo maharitra
Fanariana aluminium maty
Fanariana fampiasam-bola aluminium
Fanariana fasika aluminium
Fitaovana fanariana hafa
Fanariana vy tsy misy fangarony
Parts valva paompy
Cabint Display Display
Fitaovana fitsaboana fitaovana
Lakozia sy Cooker
Lahatsary Die Casting
Inona no atao hoe Metal Trimming Process & Die Cutting & - Trimming Services
Ny fanapahana dia ny famafana ny tselatra na ny lavaka eo an-tsisin'ny ambaratonga. Esory ny tselatra na ny lavaka avy amin'ny faritra mihombo vita amin'ny fingotra, ny ampahany vita amin'ny plastika, ny fanariana vy, na ny sisin'ny sangan'asa. Ity dingana ity dia dingana iray lehibe hiantohana ny haben'ny fiara. manarona faritra. Ny famaritana ny tsipika fanetezana no lakilen'ity dingana ity.
Minghe dia manana milina fanangonam-bolo mandroso izay mampiasa ny fihenan'ny hafanana ambany amin'ny hafanan'ny azota ranoka hamihina ireo vokatra vita amin'ny fingotra, plastika na alimika alimina-magnesium-aliminioma. Ny tsindrona haingam-pandeha amin'ny sombin-polymer dia mamely ny burrs vokatra hanala ireo burrs miaraka amin'ny fahombiazana sy ny fahamendrehana.
Ny serivisy fanetezana ny maty sy ny fanapahana henjana an'i Minghe dia nampiana tany am-boalohany mba hidera sy hanohanana ny fahaizantsika mamorona. Androany, ny mpanjifa dia mampiasa ny serivisintsika mitarika fandraharahana fanapahana na dia tsy ilaina aza ny fananganana. Nandritra ny 35 taona dia nanatsara ny serivisinay izahay mba hanomezana vahaolana ho an'ny mpanjifa amin'ny fampiharana manokana azy ireo. Ny injenieran'ny Minghe dia hijery ny famaritana ny vokatra, ny antso an-tariby ary ny fitakiana volume mba hisafidianana ny vahaolana mahomby indrindra ho an'ny tetik'asa fanangonanao.
Tombontsoa azo avy amin'ny fizotran'ny vy
Ny fiasan'ny fanapahana vy dia azo fintina toy izao:
- Fandidiana tsotra: ny mpiasa tsotra dia afaka miasa tsara ny milina aorian'ny fiofanana antsasak'adiny, ary misy rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy hisorohana ny mpiasa amin'ny asa ratsy.
- Fahombiazan'ny famokarana avo lenta: ny salan'isa fanodinana isan'andro an'ny milina fanangonam-bolo dia mitovy amin'ny famoahana asa 50-80 mpiasa mahay
- Fampitandremana avo lenta: afaka manala tselatra tena kely sy miafina izy, tsy voafetran'ny endrik'ilay vokatra, miaraka amin'ny taha ambony sy ny kalitaon'ny fitomboana azo antoka.
- Izy io dia afaka manala ny tselatra avy amin'ny vokatra vita amin'ny fingotra kely sy plastika amin'ny endriny rehetra, vokatra plastika marefo ary firaka magnesium, firaka zinc, ary fanariana firaka aliminioma miaraka amina rafitra sarotra.
- Aza manimba ny velaran'ny vokatra, manatsara ny kalitaon'ny fisehoan'ny vokatra, ary mampitombo ny androm-piainan'ny vokatra.
- Faritra kely no misy azy, 4 ~ 10 metatra toradroa fotsiny ho an'ny milina fanangonam-bokatra miampy fitaovana fanampiny.
- Ahena ny vidin'ny fampiasana bobongolo sy ny fitaovana vita amin'ny fingotra. Ny fitaovana dia tsy mila sisiny rovitra. Mangataka fotsiny ny tselatra mba ho manify toy ny 0.2mm na latsaka, ny làlan-drano mihoatra ny kely indrindra dia kely araka izay azo atao, ary ny maridrefy dia 1/5 fotsiny amin'ny triatra die -1/10.
- Mitsitsy angovo sy fiarovana ny tontolo iainana: mandany angovo faran'izay ambany ny masinina ary mamoaka singa nitrogen hafa tany am-boalohany.
Karazana famaranana vy isan-karazany - Serivisy fitsaboana amin'ny alalàn'ny hita ao Minghe
Tianao ho tsy harafesina kokoa ve ny ampahany amin'ny fanariana maty sa hanana endrika manokana? Ny serivisy famaranana vy dia safidy tena ilaina hahatratrarana tsara ny volanao. Minghe dia mpamokatra singa vita vita, ny mpiasa sy ny mpanao asa-tanana dia afaka manome serivisy fanariana maty ho faty ary karazana serivisy famaranana isan-karazany ao anatin'izany ny anodizing aluminium, ny hosodoko, ny passivation, ny electroplating, ny vovoka, ny polishing, ny black oxide, ny fiovam-po, ny fanapoahana mahery vaika , sns Ireto misy fampidirana ireo karazana famaranana vy, antsipiriany misimisy kokoa azafady mba mifandraisa aminay.
Fametahana herinaratra / fametahana ▶
Famonoana vovoka / Palitao vovoka ▶
Anodizing / Anodised ▶
Oxyde mainty ▶
Fanapoahana vakana / Fipoahana vakana ▶
Fipoahana mahery setra / sandblasting▶
Famafazana hafanana ▶
Safidio ny dingana fanetezana tsara indrindra
Aorian'ny fizahana ny lisitry ny serivisy fitsaboana Surface, misafidiana dingana iray miompana amin'ny fiheverana tena ilaina, toy ny fotoana famokarana, fahombiazan'ny vidiny, fandeferana amin'ny ampahany, faharetana ary fampiharana. Ny fandeferana avo lenta amin'ny famolavolana CNC, ny ampahany mihodina dia tsy asaina mampihatra famaranana metaly faharoa, satria ny fitsaboana dia mety hanova ny haben'ny ampahany vita amin'ny alàlan'ny fanesorana na fampidirana fitaovana kely.
Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hahitanao ny fomba ahafahan'ny olona, ​​fitaovana ary fitaovanay mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanangonanao.
Minghe Die Casting China Company dia nanangana teknolojia avo lenta amin'ny famokarana milina
Zon'ny mpamorona © 2021 Dongguan Minghe Die Casting Company